ဓလေ့မတူသော်လည်း အနှစ်သာရတူလို့ ဂါရ၀ပြုကန်တော့ကြရာဝယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဓလေ့မတူသော်လည်း အနှစ်သာရတူလို့ ဂါရ၀ပြုကန်တော့ကြရာဝယ်။
ဓလေ့မတူသော်လည်း အနှစ်သာရတူလို့ ဂါရ၀ပြုကန်တော့ကြရာဝယ်။
Posted by ခင်ခ on Oct 29, 2012 in Creative Writing, Society & Lifestyle | 24 comments
ရွာထဲ သီတင်းကျွတ်သက်ဆိုင်တဲ့ ပိုစ့်လေးတွေ ဖတ်ရတော့ စိတ်ထဲကြည်းနူးမိပါတယ်။
ငါ့တို့ရွာကြီး ဂါရ၀တရားနဲ့လျော်ညီလို့ ကြည်းနူးစရာယဉ်ကျေးမှု့လေးတွေနဲ့ ပြည့်နေပါလားလို့။
အဲဒီမှာ ကိုယ့်ရဲ့မိဘ ဆွေမျိုးနဲ့ ကိုယ်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးသူ ၀ါအားဖြင့်ကြီးသူ အကြောင်းတစ်ခုခုအရ လေးစားထိုက် ကြည်ညိုထိုက်သူတွေကို ဂါရ၀တရားရှေ့ထားလို့ မြန်မာတွေဟာ ကန်တော့ကြ တစ်နှစ်ပတ် လုံး ကာယကံ ၀စိကံ မနှောကံ နဲ့ပြစ်မှားတာများရှိရင် ခွင့်လွတ်ဖို့တောင်းပန်ကာ ကန်တော့ပန်းဆင်ကြ လူကြီး သူမ တွေကလည်း အမှတ်သညာမရှိတဲ့အကြောင်း ကျန်းမာ ချမ်းသာလို့ ကောင်းကျိုးဖြာရေး ဆုတွေပေးကာ ချစ်ခင်လိုက်ကြတာ အတော်ကိုဝမ်းသာကြည်နူးစရာပါဗျာ။ တစ်ချို့ဆို မုန့်ဖိုးတောင်ပြန်ပေးသဗျ။
ခင်ခက ရန်ကုန်မှာလည်းနေခဲ့ပြီး မန်းမှာလည်းနေသူမို့ အဲဒီမှာ ဓလေ့မတူပေမည့် အနှစ်သာရတူညီတဲ့အရာ လေးတွေ့ရလို့ ရေးမလို့လေ။
ရန်ကုန်နဲ့ အောက်မြန်မာပြည်မှာက မိဘ ဘိုးဘွား ဆွေမျိုး နဲ့ ကိုယ်ထက်အသက်ကြီးသူ ကိုယ်ကန်တော့ထိုက် သူတွေကို ၀ါလကျွတ်ကင်းလို့ သီတင်းကျွတ်ဆိုရင် ကန်တော့ကြတာ ဓလေ့လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးနဲ့ အထက်မြန်မာပြည်ဖက်ကျတော့ သင်္ကြန်ကာလ အတာနှစ်မကူးခင် ရေဖလား သို့မဟုတ် ရေခွက် လေးထဲ ရေထဲ့လို့ မိဘ ဘိုးဘွား ဆွေမျိုး နဲ့ ကိုယ်ထက်အသက်ကြီးသူ ကိုယ်ကန်တော့ထိုက် သူတွေကို ရေကန်တော့တယ်ဆိုပြီး တစ်နှစ်ပတ် လုံး ကာယကံ ၀စိကံ မနှောကံ နဲ့ပြစ်မှားတာများရှိရင် ခွင့်လွတ်ဖို့ တောင်းပန် ကန်တော့ကြပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ခုက ပုံစံမတူပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက် အနှစ်သာရကတော့ အတူတူ ပါဘဲ ဂါရ၀တရားရှေ့ထားလို့ ပြုဖွယ်လေးပါ။
အဲဒီတော့ အောက်မြန်မာပြည်ဖွား၍ အောက်မြန်မာပြည်ကြီးပြင်းရာ ရွာထဲရှိ သူကြီးနဲ့ ခင်ခထက် အသက်အရွယ် ကြီးသူများအား အခုသီတင်းကျွတ်အချိန်အခါမှာ ဂါရ၀တရားရှေမှာထားလို့ အမုန်းအာဂါသများကင်းကြဖို့ ခင်ခ ရေး ပြော မှား များရှိရင် ဂါရ၀ပြုကန်တော့ပန်းဆင်၍ တောင်းပန်လိုက်ပါကြောင်းနှင့် ခင်ခထက် ငယ်သောသူများ လည်း ခင်ခ ရေး ပြော မှား ရှိရင် ဗွေမယူကာ ချစ်ခင်ကြဖို့ရေးဆိုလိုက်တယ်ခင်ဗျ။
အထက်မြန်မာပြည်ဖွား၍ အထက်မြန်မာပြည်ကြီးပြင်းရာ ရွာထဲရှိ ခင်ခထက် အသက်အရွယ်ကြီးသူများ မန်းဓလေ့လေးအရ သင်္ကြန်ကာလရောက်ရင် ရေခွက်လေးနဲ့ ရေကန်တော့ပါရစေလို့။
ခွင့်လွှတ်ပါတယ် မြေးရေ … ဘုန်းကြီးပါစေ ၊ အသက်ရှည်ပါစေတော် …. ။ လူကြီးသဘာဝ .. ပြောမှား ဆိုမှား ရှိတာတွေ … နားလည်ပါတယ် … အမိုက်မဲလေးတွေဆိုလျှင်ဗွေမယူပါဘူး … ခွိခွိ …
ဟီးးးးးးးး ကန်တော့ပါ အန်ကယ်ရယ် …. ။ မျက်နှာပြောင်မိပါတယ် …. အကျင့်က ထိန်းမရလို့ပါ … ဟီး
ဦးဆုံးခွင့်လွှတ်သူ အဂ္ဂ မဟာ ဘီးဇီး ပျားတုပ် အမြီးလှုပ် အလကားကျော်စွာ etone ရေ ၀မ်းသာစွာ နဲ့ကျေးဇူးနော်။ ပေးတဲ့ဆုတွေနဲ့လည်း ပြည့်ရပါစေဗျာ။
အော်.. အထက်နဲ့အောက် တူဝူးဂိုး :harr:
ဂလိုပဲ အစ်မရဲ့ …. ဟိုကွေ့ရောက်လျှင်ဟိုတက်နဲ့လှော် … ဒီကွေ့ရောက်လျှင် ဒီတက်နဲ့ လှော် … ခစ်ခစ်ခစ် … ဘ၀ပေး အသိတွေပါဟယ် …. အထင်မကြီးပါနဲ့ … ခိခိ :harr:
သြော် မန်းကသင်္ကြန်မှာကန်တော့တာကိုး ဟုတ်ပြီ သင်္ကြန်ကျမှ မန်းကလူကြီးသူမတွေကို ထပ်ကန်တော့မယ်။
လာဖြစ်မယ်ဆိုဖုန်းဆက်လို့ပြောနိုင်ပါတယ် 0991039176 ပါ။
ချစ်ခင်ကြပါတယ်ဗျ ကိုခင်ခရ ………
ဒါပေမယ့် သင်္ကြန်မှာ ပိုကန်တော့ဖြစ်တယ် လေ
နှစ်ဟောင်းက အပြစ်တွေနှစ်သစ်ကို သယ်မလာချင်ဘူးပေ့ါ
ပြောမှား ရေးမှား ရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျို့ 
ပြီးတော့လည်းထပ်မှားခွင့် ပြုပါဗျို့ 
ထိပ်က တုန်တုန် ပြောတဲ့
“လူကြီးသဘာဝ .. ပြောမှား ဆိုမှား ရှိတာတွေ … နားလည်ပါတယ် …”
ဆိုတာကို ဖတ်အပြီး သဘောကျစွာ နောက်ကလိုက်ပါတယ်။
ကိုခင်ခ နှင့် တစ်ကွ သက်ကြီးဝါကြီး များ
လူကြီးသဘာဝ .. ပြောမှား ဆိုမှား ရှိတာတွေကို … နားလည်ပါတယ် …
ကျွန်မ တို့လို လူငယ်များက ခွေးလွှတ်ပါတယ်။
ခွေးမလွှတ် နိုင်ရင် ကြောင်လွှတ်ပါ့မယ်။
“အပြစ်များ ရှိရင် နှလုံးသားဘဲ အပြစ်တင်ပါ။ သူဘဲအချက်အချာ။” လို့ သီချင်းလေးရှိတယ်။
ဘယ်သူ ဆိုလဲ တော့ မမှတ်မိတော့။
ဒီတော့ ကျွန်မ တို့ လဲ “အပြစ်များ ရှိရင် ကျွန်မတို့ ရဲ့ လောဘ၊ မောဟ၊ ဒေါသ နဲ့ မာန တွေ၊ ငါစွဲ တွေ ကို ဘဲ အပြစ်ဖို့ ရအောင်”
“ငါ တို့ မှာ အပြစ်မရှိ” “အဲဒီ ငါစွဲ တွေ မှာသာ အပြစ်ရှိ”
ကျွန်မလဲ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဗွေမယူပါဘူး။
ကျွန်မကို လဲ ဗွေမယူကြပါနဲ့။
ကျက်သရေ မင်္ဂလာ နဲ့ ပြည့်ဝ တဲ့ Post လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုခင်ခ ရှင့်။ :hee:
jullies cezer ရေ ကျွန်တော်ကလည်း ခင်မင်လျှက်ပါဗျာ။
ဓလေ့ဆိုတာကတော့ အများစုလုပ်လေ့လုပ်ထလေးကိုညွှန်းမိတာပါဗျာ၊ ကိုပေါက်ရေ မန်းမှာ သီတင်းကျွတ် လုံးဝမကန်တော့ဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါ။ ရှိတော့ရှိနိုင်ပါ၏။ ဒေသဓလေ့အရ အတာသင်္ကြန်မတိုင်မှီ ရေကန်တော့တာ ပိုများသပေါ့။
ကိုဆာမိရေ ထပ်လည်းမှားပါ၊ မှားပြီးသားလည် ကျေစေအေးစေ ဒို့ယာသာစေပေါ့။
အရီးကွန်မန့်လေး အတွက်ကျေးဇူးနော်။ ကျွန်တော် မှား ရေး ပြော တွေအတွက်လည်း
တောင်းပန်ကန်တော့.. ကျေအေးခွင့်လွတ်.. (Apology / Forgiveness)
.. ဆိုတာ လူသားအတွက်ကောင်းတဲ့ အကျင့်စရိုက်ပါ…။
.. နိုင်ငံရေးမှာ.. ကမ္ဘာတန်းအဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး.. တောင်းပန်ကျေအေး လုပ်ကြတယ်တွေ့ရပါတယ်..။
ဒါပေမယ့်.. တိတိကျကျလေး.. ဘာကိုတောင်းပန်..ဘာကိုကျေအေးခွင့်လွတ်ဆိုတာ.. ပြနိုင်..သိနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါကြောင်း..
ခြုံငုံတောင်းပန်ကန်တော့တာက.. ဆားမပါတဲ့ဟင်းလို.. ခပ်ပေါ့ပေါ့ခံစားရကြောင်း.. ။
မြန်မာ့ပုံမှန်ထုံးတမ်းအတိုင်း.. ကန်တော့ပွဲဆင်ကြသဟာဖြင့်.. .”♩♫♩♫.. နောင်နှစ်ခါလည်း တောင်းပန်ပါမယ်… ♬♫♩.. အပြစ်ထပ်လုပ်ပါမယ်..♪♬♫ ..ကွယ်..ကွယ်..♬♫..♪ ကွယ်..” ( သင်္ကြန်တေးသွားတီးလုံးဖြင့် ဖတ်ရန်) ဟန်ကြီး ဖြစ်နေပါကြောင်း…
အဲဒီကနေ. အချိန်ကာလ.. အကျင့်ထုံးတမ်း.. လုပ်ပုံ.. .ရွေ့လျှောပြီး.. . လူကြီးဆိုသူတွေကို.. ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့မျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး.. “လာဘ်ထိုးတာ”.. ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာမှာကိုလည်း.. စိုးရိမ်မိပါတယ်..။
လောလောဆယ်တော့.. “ခပ်မုန်းမုန်း”.. စာစကားလေးသုံး.. ပြောလိုက်ဦးမယ်..။ “ကန်တော့ထိုက်သူအားလုံးကန်တော့ပါကြောင်း.”. “ခွင့်လွှတ်ထိုက်သူများကိုလည်း.. ခွင့်လွတ်ပါကြောင်း”…
မှတ်ချက်.။ ။ ဤအထဲတွင် ဦးခင်ခ ပါပါသည်။
တဂျီးကျော သလို ((( နိုင်ငံရေးမှာ.. ကမ္ဘာတန်းအဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး.. တောင်းပန်ကျေအေး လုပ်ကြတယ်တွေ့ရပါတယ်..။ )) ဆိုတော့ ..နိုင်ငံရေးမှာ ထာဝရ ရန်သူ/မိတ်ဆွေမှ မရှိတာ တဂျီးရယ် ။ မယုံရင် ဗမာပြည်ကြီးရဲ့ နိုင်ငံရေးကိုကြည့်။ ဘယ်သူက ၊ဘယ်သူ့ကို ၊ဘာတွေ ၊ဘယ်တုန်းက ၊ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ၊ ဘယ်လို ၊မှားခဲ့တာကို ၊ဘယ်လိုခွင့်လွှတ်ပါ၊ ဘယ်သူရယ်လို့ ဆိုပြီး ဘယ်သူမှ အချင်းချင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိနဲ့ မတောင်းပန်ပဲ “ အောင်လ ” ဆိုတာလောက်နဲ့ ပြီးသွားတော့ တဂျီးပြောတဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာ ……?????
ကျနော်သည်။ သူကြီး ငွေကုန်နေသည့်အချိန်တွင် အလိုက်ကန်းဆိုးမသိပဲ ပထမဆုံးအကြိမ်အီမေးပို့ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၂ သိန်းချေးခဲ့မိသည့်အတွက် တောင်းပန်ပါသည် သဂျှီးမင်း ခင်ဗျား…။
( ဟိုတလောက.. ဟက်ကာတွေလက်ချက်ကြောင့် အကုန်အကျပိုသွားတဲ့..)
၀.၂၅ရာခိုင်နှုန်း.. ဒေါ်လာ ၅ရာပဲပြန်ဆပ်ပါနော… ကျေအေးခွင့်လွှတ်ပါ့မယ်..
တစ်ခုလောက်သိပါရစေ … ကန်တော့တာ ကို ဘာလို့ မုန့်ဖိုးပြန်ပေးတာလဲ ? တစ်ချို့က ၃ သောင်းဖိုးဝယ်ရင် ၄ သောင်းပြန်ပေးတယ် … တစ်ချို့က နည်းနည်းပဲပေးတာရှိတယ် … ဘာလို့လဲမသိဘူး …နော်
မမလေး ငယ်ပါသေး လို့ဘဲပြောရမလားမသိဘူးနော်။ ( အရွယ်မသိလို့နော် )
မမလေး ကန်တော့ခံရတဲ့ အရွယ်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို အသက်အရွယ် နဲ့ အချိန်ကာလက ဖြေပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့—။
ဒီနေရာမှာ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး တွေအတွက် သီတင်းကျွတ်ကန်တော့ အမည်ခံ သူပေး ကိုယ်ပေး ကိစ္စမပါဘူးနော် ကျွန်တော်ရေးတာ ရိုးရိုးလေး အတွေးနဲ့ပါ။
`“ကန်တော့ထိုက်သူအားလုံးကန်တော့ပါကြောင်း.”. “ခွင့်လွှတ်ထိုက်သူများကိုလည်း.. ခွင့်လွတ်ပါကြောင်း”…
မှတ်ချက်.။ ။ ဤအထဲတွင် ဦးခင်ခ ပါပါသည်။´(ခရက်ဒစ်တူ သဂျီး။)
( ဒါပေမယ့်.. တိတိကျကျလေး..
ဘာကိုတောင်းပန်..ဘာကိုကျေအေးခွင့်လွတ်ဆိုတာ.. ပြနိုင်..သိနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါကြောင်း.. ခြုံငုံတောင်းပန်ကန်တော့တာက.. ဆားမပါတဲ့ဟင်းလို.. ခပ်ပေါ့ပေါ့ခံစားရကြောင်း.. ။ )
သူဂျီးရေ သွေတိုးဖြစ်မှာစိုးလို့ ခပ်ပေါ့ပေါ့လေး ခြုံငုံတောင်းပန်တာပါ။ ပြီးတော့ ရေးခဲ့ မန့်ခဲ့တာ တွေကလည်း မများပေမယ့် မနည်းဖူးဆိုတော့ တစ်ခုချင်းရေးပြဖော်ဖို့ကလည်း အခက်အခဲကြောင့်ပါ ခင်ဗျ၊ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သဘောကြီးစွာ ခွင့်တာလွှတ်ပေါ့ဗျာ။
ကိုကြီးမိုက်ကိုလည်း ခင်မင်လျက် ခင်ခပါ။
ကိုခငိခစာတွေ ဖတ်ပြီး သဘောကျပေမယ့် သဘောတူပါတယ်၊ကြိုက်ပါတယ် လောက်နဲ့ ကွန်မန့်မပေးချင်မိတဲ့အခါတွေနဲ့ တိုးလို့
ကွန်မန့်နဲ့ အားမပေးမိတာကို တောင်းပန်ပါတယ်။
မပဒုမ္မာရေ ပိုစ့်တွေဖတ်ဖြစ်တယ်လို့သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျ။
ဒီရွာထဲ တွေ့နေကျ အကုန်မောင်နှမတွေပဲမို့ ကိုခင်ခကို ချစ်ခင်လျက်ပါ…
ရန်ကုန်မှာရော ကန်တော့လို့ ရနိုင်မလားမသိနော်…
နှင်းနှင်းရေ ရန်ကုန်မှာတော့ လုပ်လေ့လုပ်ထ မရှိဘူးမို့ ခပ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေမလားဘဲနော်၊
ချစ်ခင်လျက် – ခင်ခ။
တနေ့တာမကုန်ခင် ကိုယ်နဲ့ကြုံဆုံကြရသူတိုင်းကို “နေမ၀င်ခင်ခွင့်လွှတ်ပါ”…ဆိုတဲ့ Seven Day Adventists ဘာသာအယူရှိသူတွေရဲ့ သတိပေးစကားမှတ်မိပါတယ်။
ခ၀ါမချနိုင်၊ ခါး မခိုင်သည်၊